Webhusaiti Yakavanzika Mitemo | Martech Zone
Chishanu, June 8, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Marty Thompson
Marty neni takanga takasimuka pa Social Media Club muChicago yakachengetwa nevanhu vakanaka pa Edelman. Nyaya yaive Transparency muSocial Media uye ma panelists aive Tom Chernaik, CEO we Cmp.ly, Michael Kiefer, GM pa BrandProtect, Rich Sharp, SVP yeDhijitari Hutano Boka Edelman naRoula Amire, Managing Mupepeti we Ragan.com. Iyo hurukuro yakanangana nekutyisidzira uye njodzi inosanganisirwa nevezvenhau uye kuti makambani anogona kuronga, kudzivirira nekupindura kumatambudziko. Yakanga iri hurukuro huru uye imwe iyo mikuru mikuru iri kugadzirisa izvozvi… Ndinovimba kuti mabhizinesi madiki nepakati nepakati anotanga kucherechedzawo!
Vashambadziri veshambadziro vanogadzira zvigadzirwa zvepamhepo zvepamhepo zvevatengi, vamiririri vemubatanidzwa nemapoka evatengi vevashandi vari kuomerera kuhunhu hwakavanzika. Usateedzere, yazvino webhu yekutevera yekusarudza-kubuda kufamba muUS kuri kuwana nzvimbo, nemabhurawuza nemakambani zvakafanana vachimanikidzwa mukupa iri nyore kubuda-matekinoroji kuchengetedza ruzivo rwemunhu wega zvakavanzika. Pane pekutangira muEurope kare: iyo European ePrivacy Directive mutemo unoda kuti nzvimbo dzishande nesimba kuti dziwane mvumo kubva kuvashanyi kuti vateedze. Ona nyaya dziripo, pamwe nekukanganisa mari yekukanganisa zvimwe zvinokanganisa.
Iyi infographic yakaburitswa na kuona. Ensighten Chakavanzika ndeyekuvanzika uye kuteedzera mhinduro iyo inovimbisa yako webhusaiti yevatengi data muunganidzwa iri mukuteerera kuzere neyako zvakavanzika mutemo pamwe neUS nemutemo wepasirese nekutarisa ese ako webhusaiti ma tag. Ensighten Yakavanzika inoita kuti nzvimbo dziteedzere zvizere neDoT Track (DNT) mabhurawuza misoro uye UK Cookie Mutemo kusarudza-mune zvigadzirwa, pamwe nekukugonesa iwe kupa vatengi kuunganidzwa kwedatha yekusarudza-kubuda kana kusarudza-mukati mashandiro pane yako webhusaiti.